ထူးထူးခြားခြား အသက် ၁၃ နှစ်မှာ သုတေသနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသူ - Top MM News
ထူးထူးခြားခြား အသက် ၁၃ နှစ်မှာ သုတေသနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသူ
alpha | May 26, 2020 | Knowledge | No Comments
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကလေးဘ၀ အရွယ်ကတည်းက အရွယ်ရောက်ပြီးလူကြီးများနှင့် တန်းတူ ဉာဏ်ရည်ရှိကာ လုပ်ကိုင်နိုင်သော သူ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ သူတို့ကို ကလေးပါရမီရှင်များဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။ ထိုအထဲတွင် အမေရိကန် အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မှ Daniel Liu ဆိုသည့် ကောင်လေးကိုလည်း ထည့်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်။
သူအကြောင်းကို လူတွေစ၍ သိရှိကြသည်မှာ လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်ကျော်က သူ့ပုံကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တင်ခဲ့သော သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည့် အတန်းဖော် Cigdem Kahyaoglu က “ဒီကလေးက ငါ့ရဲ့ ဓာတုဗေဒ အတန်းဖော်ပေါ့။ သိချင်ရင် သူ့ကို အီးမေးပို့ပြီး လှမ်းမေးလို့ရတယ်” ဟု ဆိုရှယ်နက်ဝက်တစ်ခုဖြစ်သည့် တွစ်တာတွင် တင်လိုက်ရာမှ လူအများ၏ အံသြခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ တက္ကသိုလ်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် အသက်အငယ်ဆုံး အရွယ်အဖြစ် ၁၆ နှစ် ၁၇ နှစ်မှ စတင်တက်ရသော်လည်း Daniel Liu က မူ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ကတည်းက ဝင်ခွင့်ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကလေးအရွယ်သာရှိသော်လည်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထက် သာလွန်သော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထို မတိုင်ခင်ကတည်းက သူ့အကြောင်းသည် အမေရိကန်တွင် ရေပန်းစားခဲ့သည်။ နာမည်ကျော် သိပ္ပံအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် The Sciecne Guy တင်ဆက်သူ Bill Nye နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖူးသလို အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း အိုဘားမား၏ အိမ်ဖြူတော်တွင် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခြင်းခံရပြီး ပညာသင်ဆု ဒေါ်လာ ၁သောင်းကို ပေးအပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရဖူးသူလည်း ဖြစ်သည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိပြီးနောက် Liu သည် အမေရိကန် အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ရှိ Toledo တက္ကသိုလ် တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူဝါသနာပါသည့် ဘာသာရပ်ဖြစ်သည့် Organic Chemistry ဘာသာရပ်ကို အထူးပြု၍ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်ဖြစ်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်းဝင်ဖို့အတွက်တော့ သူ့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရသည်။ တက္ကသိုလ်များတွင် ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းသို့ အသက် ၁၂နှစ်အောက် အရွယ် ကလေးငယ်များကို ဝင်ခွင့်မပြုရန် ပိတ်ပင်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း Liu ၏ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် ဉာဏ်ရည်ကို ယုံကြည်သော ကျောင်းတာဝန်ရှိသူများက ချွင်းချက်အနေနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
အချို့ကမှု အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးငယ်သည် အရွယ်နှင့် မမျှ၍ နားလည်ရန်ခက်ခဲသော သိပ္ပံဘာသာရပ်များကို လိုက်ပါသင်ယူနိုင်ပါ့မလားဟု စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။ စာမေးပွဲများ ဖြေသောအခါ ထိုးစိုးရိမ်မှုများ ပျောက်သွားတော့သည်။ တတန်းတည်း အတူတက်သော အခြား အရွယ်ရောက်ပြီး ကျောင်းသားအများစုက အမှတ် ၅၀ ရလျှင် အောင်မြင်သည့် ဘာသာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာမေးပွဲကို ကျခဲ့ကြသော်လည်း Liu က မူအောင်မှတ်ကိုကျော်၍ ၉၉မှတ် အထိပင် ရရှိခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အသက် ၁၃နှစ် ရှိသွားပြီဖြစ်သည့် Liu သည် ဓာတ်ခွဲခန်း သုတေသနာ ပညာရှင်တစ်ယောက် အဖြစ် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။ သူနှင့် အတူ အခြားပညာရှင် နှစ်ယောက်ပူးပေါင်း၍ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု အဆင့်မြှင့်ရေးစာတမ်းတစ်ခုတင်ခဲ့သေးသည်။ ထိုစာတမ်းတွင် ဆေးဝါးများကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ၊ eco-friendly နည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းများကို အကြံပြုထားသည်။
Liu နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူ ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Dr. Mohit Kapoor က “အလုပ်လုပ်နေရင် သူ့ကို ကလေးတစ်ယောက်ဆိုတာ မေ့မေ့သွားတယ်။ သူက အခြားကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တစ်ယောက်လိုပဲ လုပ်နိုင်တယ်လေ။ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲက ကိစ္စတော်တော်များများကိုလည်း နားလည်ထားတဲ့သူပါ။ သူနဲ့ အလုပ်အတူတွဲလုပ်ရတာ အံသြဝမ်းသာဖို့ ကောင်းပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။ Daniel Liu က မူ လက်ရှိတာဝန်များပြီးဆုံးလျှင် ဟားဗတ် နှင့် မန်ဆာချူးဆက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်များကို ဆက်လက်တက်ရောက်ကာ သူ၏ ပညာရေးကို မြှင်တင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသည်။
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက်……. သုတဇုန်
Home remedies that you should take when you are vomiting
အထူးသတိထားသင့်တဲ့ နေ့အလိုက် နေပတ်လမ်းကြောင်း ဖြတ်သန်းနိုင်သောမြို့များ နှင့် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်တဲ့အခြေအနေများ
Why You Should Grow leafy greens At Home
မြန်မာပြည်က လုပ်စား သမားတွေ နှာခေါင်းစည်း (Mask) တပ်စေချင်လို့ အရေးယူတာလား? ရိုက်စားလုပ်နေကြတာလား